Amanyathelo ama-3 okuQala uMkhankaso weNtengiso yeVidiyo yeShishini | Martech Zone
NgoMgqibelo, nge-6 kaFebruwari ngo-2016 NgeCawa, ngoFebruwari 7, 2016 UOwen Hemsath
Ukuthengisa ividiyo isebenza ngokupheleleyo kwaye abathengisi abasebenzisa iqonga baya kuvuna umvuzo. Ukusuka kwinqanaba ku-YouTube kunye noGoogle ekufumaneni ithemba lakho elijolise kuyo ngeentengiso zevidiyo ze-Facebook, umxholo wevidiyo unyukela phezulu kwi-newsfeed ngokukhawuleza kune-marshmallow kwi-cocoa.
Ke ulusebenzisa njani olu hlobo luthandwayo kodwa luyinkimbinkimbi?
Leliphi inyathelo lokuqala ekwenzeni umxholo wevidiyo obandakanyeka kubaphulaphuli bakho?
At Videopot, besisoloko sivelisa kwaye sithengisa ividiyo yoosomashishini, amashishini, kunye neempawu ukusukela ngo-2011. Ndisebenze ngokobuqu kwimikhankaso yokusasaza kunye nevidiyo kubaqeqeshi bamashishini abaphezulu kunye namagama ambalwa kwintengiso yemidiya yoluntu.
Siyayazi into esebenzayo, kwaye sineematriki zokuyibonisa.
UHenry Ford waguqula ishishini xa wayesazisa ngomgaqo wendibano kwimveliso yeemoto. Yindlela efanayo esiyithathayo nevidiyo: apho inyathelo ngalinye lilandelelana lishukumisela ukusondela kwimveliso yevidiyo ephumeleleyo. Isinyathelo sokuqala kule nkqubo kukuphuhliswa komxholo.
Qala ngesiCwangciso seNkqubo
Ngaphambi kokuba uthenge ikhamera ebiza kakhulu nge-selfie stick, abathengisi kufuneka kuqala bakhe isikhokelo (izihloko kunye nezihloko) apho iphulo lakho lokuqala levidiyo liza kwakhiwa khona. Oku sikubiza ngokuba licebo lakho lenkqubo.
Sisebenzisa indlela enamanqanaba amathathu ekuphuhliseni isicwangciso senkqubo esiza kufezekisa iinjongo ezintathu zeshishini:
Beka iividiyo zakho kwi iphepha lokuqala leziphumo zophando.
Sungula inqaku lakho lokujonga njenge ilizwi eligunyazisiweyo.
Ukuqhuba kwezithuthi kwiphepha lakho lokufika okanye umcimbi wokuguqula.
Ngelixa ividiyo nganye kufanele ukuba ibe neenjongo eziphambili, isiCwangciso soMxholo se-P3 asizukukunceda ekwenzeni izihloko zevidiyo eziza kutsala umbukeli wakho oyintloko kodwa ukulandela le fomathi kuya kukunceda ukuba uqule umxholo weevidiyo zakho ukuze ukhokele ababukeli ukuba bathathe amanyathelo afanelekileyo.
Isicwangciso soMxholo weP3
Tsala umxholo (ucoceko): Lo mxholo utsala umbukeli wakho. Ezi vidiyo kufuneka ziphendule imibuzo ebuzwa ngabaphulaphuli bakho yonke imihla. Ezi vidiyo zinokuchaza amagama okanye ithiyori ngokunjalo. Ngokubanzi, lo ngumxholo wakho ohlala uluhlaza.
Push Umxholo (Hub): Ezi ziividiyo ezijolise ngakumbi kuhlobo lwakho kunye nobuntu bakho. Ngale ndlela, ijelo lakho lisebenza njengejelo lokuvota apho uthatha isigqibo malunga nento umbonisi aya kuyibona okanye ayive. Ngamanye amagama, ulawula i-ajenda, kwaye ijelo lakho liba yi "hub" yomxholo onxulumene nomzi mveliso wakho.
Umxholo wePow (Hero): Ezi ziividiyo zakho ezinkulu zebhajethi. Kuya kufuneka ziveliswe rhoqo kwaye zisebenze kakuhle xa zidityaniswa neziganeko eziphambili okanye iiholide ezibhiyozelwa lushishino lwakho. Umzekelo, ukuba unejelo laBasetyhini, ke ukuvelisa ividiyo enkulu yoSuku loMama kunokukunceda kakuhle. Ukuba wenza iividiyo zabadlali okanye ishishini lezemidlalo, iSuper Bowl inokuba lithuba lokuvelisa ividiyo ephezulu.
Bhalisela uqeqesho luka-Owen luka-YouTube namhlanje!
tags: ividiyopotyoutubeUkuthengisa kwi-youtubeIphulo lokuthengisa kwi-youtube
U-Owen Hemsath yingcali ye-YouTube kunye noMsindisi womhlaza. UMongameli Videopot, UOwen uye wakha ishishini lehlabathi ukusuka kwinto elula Isiteshi se-YouTube. Uyingcali ehlonitshwayo kwizihloko ezinxulumene ne-YouTube, iintengiso zevidiyo ze-Facebook, uyilo lwewebhusayithi kunye nentengiso yevidiyo.